Ukunakekelwa kwe-spa kwakho kokubili
Uma ufuna ukuchitha isikhathi nomuntu wakho othandekayo ngenjabulo futhi ngenzuzo, zama i-pair of spa treatments. Sizoxoxa ngabo kulesi sihloko. Amasters of salons kanye spa bajabula kuphela ukudiliza phakathi kwemililo emibili.
Uma umngane wakho eyokulwa nomunye umgwaqo emerald, futhi udlala ne-hydromassage, uzothunyelwa ku-hammam yowama-pearl, bese uya eshaweni esilungile samaminerali. Ukufudumala emahhovisi aseduze ngesikhathi sokugoqa udaka (ngenhla umbhede uzokwakha i-dome, okuzosiza umusi oshisayo) nokusilalisa okuphumuzayo. Kodwa ngeke ukwazi ukuyikhumbula, noma kunjalo, uzothola yonke imisipha ekunamatheleni iminwe yamasseurs. Esigumbini sokuphumula silinde ukugeza okuphambene nemilenze.
Ngemuva kokubingelela kwendabuko yasempumalanga - ukugeza izinyawo nge-petal pink emaceleni womabili - izivakashi ezimbili zizohanjiswa ebhodini elikhulu: zizokhanyiswa ngezibani ezinemibala kanye namafutha abalulekile azongeza. Ukushayela okuningi, umbhangqwana uzoya emasitini ase-lavender soap and a scrub - ukakhukhunathi, ikhofi noma i-turmeric. Futhi lonke leli hora lizosetshenziselwa ukusikhipha ngobuningi e-Balinese, ukufudumala ngaphansi kwamatshe ashisayo noma ukufaka izinyawo ze-reflexotherapist.
Igumbi le-Spa lamabili. Emzimbeni we-Romeo wakho uzokhipha umhlobiso ngamatshe ashisayo, futhi ukuhlunga okulandelayo kuzokhipha ukucindezeleka. Uzonikezwa ukuhlolwa okuningi kwe-tonic. Ukuhlukumeza okuphambene nokuqala kokushisa okufudumayo, bese kuthi imvuthuluka yeqhwa izosheshisa ukujikeleza futhi yengeze ukuqina esikhumbeni, futhi ukugoqa nge-sea algae kuzosusa ubuthi.
Ngemva kokuphuza i-Delosovskogo itiye eluhlaza nge-mint futhi ephumula e-sauna eyomile yaseFinland, ngamunye wabo ugijima ngendlela yakhe. Uyisiko lesiFulentshi esivela eThe Lesmrm esiseMarins Saint-Malo nge-massage, ukulimala izithelo nezimbali nokugubha nge-volcanic lava ne-poppy. Isigaba esiphezulu - ohlelweni lweThailand oluvela ku-Alina Zanskar ngemifino yokuhluma imifino, ukuhlunga okufakwe emanzini okugcoba ngokukhipha ukhilimu olwandle. Ukukhohlisa ngaphansi kwama-thermosets eduze kwamabhedi, vuka njengamasha.
Njengoba usufudumale ngo-hammam, uzoya kuKhabhinethi ngamatafula amabili okugcoba ukugqoka nge-scoops, khona-ke ngaphansi kweshazi (naye futhi kabili) nokuhlambalaza kwe-Balinese Igaway. Esikhundleni setiyi namantongomane endaweni yokuphumula, kuzodingeka ulinde ukudla kwasemini.
Ekamelweni elithambile ngamakhandlela ulindelwe nge-cream-peeling, okunamathiselwe kwe-chocolate, ukusikhipha nge-chocolate enomuncu obuncibilikile kanye nesigamu sehora lokukhanya kwelanga endaweni okuthiwa i-thermos: elele ematithini angenawo amandla emgodini we-hydromassage, uzokhohlwa igama lakho. Vuka ukukhala kwezingilazi: i-champagne ne-truffle ye-tshokolethi kuyadingeka kuhlelo.
"Iwayini elibomvu ne-bamboo"
Njengoba uthola ukuphumula okuhle ekugezeni ubisi lwewayini, thatha umngane wakho endlini yokugeza bese uhamba no-Alina Zanskar ubheka ama-apricot namathambo kanye nokusikwa kwehora le-shiatsu ngamafutha kanye namagugu. Ama-rubies ashisayo, i-tourmaline, i-citrine, i-emerald ne-aquamarine izoshisa zonke iziklamo. Isikhathi esinqunyiwe senkambiso kungcono ukukhipha ngosuku: konke kuzoqhubeka ngaphandle kokungaphansi kwamahora ambalwa.
Ngemuva kokungena emgqonyeni we-barrel, ukubhekwa ne-thyme nokusikhipha, ufuna nje ukungena phezu kwe-Ice. Esikhundleni salokho, uzombozwa uju, ugobe ngamaqabunga e-Birch avela eThalasso Bretagne bese ushiya isigamu sehora. Futhi-ke izikhathi ezimbili - ngeziphazamiso zokugeza okuhamba nge-whirlpool noma i-sauna eyomile. Uhlelo lwehora eli-3 luzokhiqiza ubuthi obuvela kubathandi be-exotics baseRashiya, baludume futhi bashiye ngemuva kokubala kombala no-Siberia.
I-session ayinakwenzeka ukuhola usuku lokuqala - i-wizard izosebenzisa i-washcloth nesepha nge-oucalyptus amafutha. I-master izoba emzimbeni ongenakuboshwa ngama-suit suit. Ukulimala okunyusa kwe-French brand La Sultane de Saba nokuxilonga umzimba okunamandla, lapho uzohlukaniswa khona isikhathi esifushane, itiye elithambile ne-detox.
I-lotion enhle yesikhumba samafutha
I-massage yekhwalithi, izinhlobo zayo nezinzuzo
Izinketho zomumo ophelele
Kunokuba ungakwazi ukususa amachashazi amnyama ekhaleni
Inkukhu ngo-ukhilimu omuncu ngepelepele ebomvu
Izithoko ezithandekayo zikaNovemba
UDenis Klaver uyilungiselela indodana ephakeme yesikhulu
Iresiphi elula ye-chocolate donuts kuhhavini
Amakhukhi "Alice e-Wonderland"